ကင်းမျှော်စင်—လေ့လာရန် စာစောင် | ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၀၇
ဖတ်လို ကိုရီးယား ချက် ချီချေဝါ ဂရိ ဂါ ဂျာမန် စလိုဗက် စလိုဗေးနီးယား စီပီဒိုင် ဆက်ဆွာနာ ဆီလိုဇီ ဆွာဟီလီ တဆောန်ဂါ တရုတ် ကန်တုံ (ခေတ်သုံး) တရုတ် ကန်တုံ (ရှေးသုံး) တရုတ် မန်ဒရင်း(ခေတ်သုံး) တရုတ် မန်ဒရင်း(ရှေးသုံး) တူရကီ ဒတ်ချ် ဒိန်းမတ် ပိုလန် ပေါ်တူဂီ (ဘရာဇီး) ဘိုင်ကိုးလ် ဘူလ်ဂေးရီးယား မာလဂက်စီ မာလာယာလမ် မြန်မာ ယူကရိန်း ရိုမေးနီးယား ရှိုနာ လစ်သူယေးနီးယား ဟန်ဂေရီ ဟီလီဂေနွန် အင်္ဂလိပ် အစ်ဘို အီတလီ အေးဝေး
ဗျာ. ၇:၃ တွင် ဖော်ပြထားသော တံဆိပ်ခတ်ခြင်းသည် အဘယ်နည်း။
ဗျာ. ၇:၁-၃ တွင် ဤသို့ဖော်ပြထားသည်– “ထို့နောက်မှ မြေကြီး၊ ပင်လယ်၊ သစ်ပင်များတို့၌ လေမလာစေခြင်းငှာ ကောင်းကင်တမန်လေးပါးတို့သည် မြေ၏ လေးမျက်နှာလေတို့ကိုကိုင်၍ မြေလေးမျက်နှာ၌ရပ်နေသည်ကို ငါမြင်၏။ အသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားသခင်၏ တံဆိပ်ပါသောကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးသည် အရှေ့မျက်နှာကတက်လာသည်ကိုငါမြင်၏။ သူသည်လည်း မြေနှင့်ပင်လယ်ကို ညှဉ်းဆဲရသောအခွင့်ရှိသော ကောင်းကင်တမန်လေးပါးကို အသံလွှင့်၍ ‘ငါတို့ဘုရားသခင်၏ကျွန်တို့ကို နဖူး၌ တံဆိပ်မခတ်မီတိုင်အောင် မြေ၊ ပင်လယ်၊ သစ်ပင်တို့ကိုမညှဉ်းဆဲပါနှင့်’ ဟုကြီးသောအသံနှင့်ကြွေးကြော်လေ၏။”
“လေးမျက်နှာလေ” ကို လွှတ်သောအခါ အကျိုးဆက်အနေနှင့် မှားယွင်းသောဘာသာရေးနှင့် ဆိုးသွမ်းသောဤလောက၏ကျန်အပိုင်းကို ဖျက်ဆီးမည့် ‘ကြီးစွာသောဆင်းရဲခြင်း’ ဖြစ်လိမ့်မည်။ (ဗျာ. ၇:၁၄) “ဘုရားသခင်၏ကျွန်တို့” သည် မြေကြီးပေါ်ရှိ ခရစ်တော်၏ဝိညာဉ်တော်ဖွား ခရစ်ယာန်များဖြစ်ကြသည်။ (၁ ပေတရု ၂:၉၊ ၁၆) ထို့ကြောင့် ဤပရောဖက်ပြုချက်က ကြီးစွာသောဆင်းရဲခြင်း စတင်ဖြစ်ပျက်လာသောအခါ ခရစ်တော်၏ညီတော်များတံဆိပ်ခတ်ခြင်း ပြည့်စုံပြီးဖြစ်မည်ကို ဖော်ပြသည်။ သို့သော် အခြားကျမ်းချက်များက ဝိညာဉ်တော်ဖွားများကို ကနဦးတံဆိပ်ခတ်ခြင်းရှိကြောင်း ဖော်ပြသည်။ ထို့ကြောင့် ကနဦးတံဆိပ်ခတ်ခြင်းနှင့် နောက်ဆုံးတံဆိပ်ခတ်ခြင်းဟူ၍ ကျွန်ုပ်တို့ပြောသောအခါများရှိသည်။ ထိုတံဆိပ်ခတ်ခြင်းနှစ်ခု၏ခြားနားချက်ကား အဘယ်နည်း။
“တံဆိပ်ခတ်သည်” ဟူသောစကား၏အဓိပ္ပာယ်ကို သုံးသပ်ကြည့်ပါ။ ရှေးအချိန်များတွင် တံဆိပ်တုံးတစ်ခုသည် စာရွက်စာတမ်းပေါ်တွင် အရာထင်ကျန်အောင်ဖိနှိပ်ရာ၌ အသုံးပြုသောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤစကားလုံးသည် နှိပ်ထားသည့်တံဆိပ်အမှတ်အသားကိုလည်း ရည်ညွှန်းနိုင်သည်။ ထိုခေတ်တွင် စာရွက်စာတမ်းသည် အစစ်အမှန်ဖြစ်ကြောင်း သို့မဟုတ် ပိုင်ဆိုင်သူကို ဖော်ပြရန် တံဆိပ်ခတ်လေ့ရှိသည်။—⁠၃ ဓမ္မရာဇဝင် ၂၁:၈; ယောဘ ၁၄:၁၇။
ပေါလုသည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကို တံဆိပ်ခတ်ခြင်းနှင့် ဤသို့နှိုင်းယှဉ်ဖော်ပြခဲ့သည်– “သင်တို့နှင့်ငါတို့ကို ခရစ်တော်၌တည်စေ၍ ဘိသိက်ပေးသောသူကား ဘုရားသခင်ဖြစ်သတည်း။ ထိုဘုရားသခင်သည် ငါတို့ကိုတံဆိပ်ခတ်၍ ငါတို့စိတ်နှလုံးထဲ၌ ဝိညာဉ်တော်တည်းဟူသောစရန်ကို သွင်းပေးတော်မူ၏။” (၂ ကောရိန္သု ၁:၂၁၊ ၂၂) ထို့ကြောင့် ယေဟောဝါသည် ဤခရစ်ယာန်များအား မိမိပိုင်ဆိုင်ရာများဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြရန် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဖြင့် သူတို့ကို ဘိသိက်ပေးသည်။
သို့သော် ဝိညာဉ်တော်ဖွားများ၏တံဆိပ်ခတ်ခြင်းတွင် အဆင့်နှစ်ဆင့်ရှိသည်။ ကနဦးတံဆိပ်ခတ်ခြင်းသည် နောက်ဆုံးတံဆိပ်ခတ်ခြင်းနှင့် ခြားနား၏၊ (၁) ရည်ရွယ်ချက်နှင့် (၂) အချိန်ကာလတွင်ဖြစ်သည်။ ကနဦးတံဆိပ်ခတ်ခြင်းသည် ဝိညာဉ်တော်ဖွားခရစ်ယာန်များအရေအတွက်တွင် ထပ်တိုးလာသော အဖွဲ့ဝင်သစ်တစ်ဦးရွေးချယ်ခြင်းဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးတံဆိပ်ခတ်ခြင်းမှာမူ ဤရွေးချယ်ထားသော၊ တံဆိပ်ခတ်ခြင်းခံထားရသူသည် သူ၏တည်ကြည်မှုကို အပြည့်အဝတင်ပြခဲ့ကြောင်း အတည်ပြုရန်ဖြစ်သည်။ ထိုနောက်ဆုံးတံဆိပ်ခတ်ခြင်းအချိန်ကျမှသာ ဝိညာဉ်တော်ဖွားတစ်ဦးသည် စမ်းသပ်ခံခဲ့ပြီးသော ‘ငါတို့ဘုရားသခင်၏သစ္စာရှိကျွန်’ ဖြစ်ကြောင်း အပြီးသတ်ခွဲခြားဖော်ပြသည့်အနေဖြင့် “နဖူး၌” အတည်တံဆိပ်ခတ်ခြင်းခံရမည်။ ဗျာ. အခန်းကြီး ၇ တွင် ဖော်ပြထားသောတံဆိပ်ခတ်ခြင်းသည် ဤနောက်ဆုံးတံဆိပ်ခတ်ခြင်းကို ရည်ညွှန်းသည်။—⁠ဗျာ. ၇:⁠၃။
ကနဦးတံဆိပ်ခတ်ခြင်း၏ အချိန်ကာလနှင့်ပတ်သက်၍ တမန်တော်ပေါလုသည် ဝိညာဉ်တော်ဖွားခရစ်ယာန်များကို ဤသို့စာရေးခဲ့သည်– ‘သင်တို့သည်လည်း ကယ်တင်တော်မူခြင်းအကြောင်းနှင့်ယှဉ်သော ဧဝံဂေလိတရားတည်းဟူသောအမှန်တရားကို ကြားနာရ၍ ထိုခရစ်တော်ကို ယုံကြည်ပြီးမှ ကတိတော်နှင့်ယှဉ်သော သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏တံဆိပ်ခတ်ခြင်းကို ခံရကြပြီ။’ (ဧဖက် ၁:၁၃၊ ၁၄) ဖြစ်ရပ်များစွာတွင် ပထမရာစုခရစ်ယာန်များသည် သတင်းကောင်းကို ကြားနာ၍ ခရစ်တော်ကို ယုံကြည်သူများဖြစ်လာပြီးမကြာမီတွင် အမှန်တံဆိပ်ခတ်ခြင်းခံရကြောင်း သမ္မာကျမ်းစာမှတ်တမ်းက ဖော်ပြသည်။ (တမန်တော် ၈:၁၅-၁၇; ၁၀:၄၄) ယင်းသို့သောတံဆိပ်ခတ်ခြင်းသည် ဘုရားသခင့်မျက်နှာသာတော် စတင်ရရှိကြောင်းကို တင်ပြခဲ့သည်။ သို့သော် ယင်းသည် ဘုရားသခင်၏အပြီးသတ်မျက်နှာသာရရှိသည်ဟု မဖော်ပြခဲ့ချေ။ အဘယ်ကြောင့်နည်း။
ပေါလုက ဝိညာဉ်တော်ဖွားခရစ်ယာန်များအား “ရွေးနုတ်တော်မူခြင်းနေ့ရက်အဖို့ သင်တို့ကိုတံဆိပ်ခတ်တော်မူ” သည်ဟု ဖော်ပြခဲ့သည်။ (ဧဖက် ၄:၃၀၊ သမ္မာ) ယင်းက ထိုကနဦးတံဆိပ်ခတ်ခြင်းပြီးနောက် အများအားဖြင့် နှစ်များစွာကြာညောင်းသည့် အချိန်ကာလတစ်ခုကို ဖော်ညွှန်းသည်။ ဝိညာဉ်တော်ဖွားများသည် သူတို့ကို သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဖြင့် တံဆိပ်ခတ်သည့်နေ့မှစ၍ သူတို့သေဆုံးသည့်အထိဖြစ်သော သူတို့၏အသွေးအသားခန္ဓာကို “ရွေးနုတ်” သည်အထိ တည်ကြည်ရန် လိုအပ်သည်။ (ရောမ ၈:၂၃; ဖိလိပ္ပိ ၁:၂၃; ၂ ပေတရု ၁:၁၀) ထို့ကြောင့် ပေါလုသည် သူ့အသက်တာ၏အဆုံးပိုင်းအချိန်ရောက်မှသာ ဤသို့ပြောနိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်၏– “ပြေးရသောလမ်းကို အဆုံးတိုင်အောင်ပြေးပြီ။ ယုံကြည်ခြင်းတရားကိုစောင့်ရှောက်ပြီ။ ယခုမှစ၍ ဓမ္မသရဖူသည် ငါ့အဖို့သိုထားလျက်ရှိ၏။” (၂ တိမောသေ ၄:၆-၈) ထို့ပြင် ယေရှုသည် ဝိညာဉ်တော်ဖွားခရစ်ယာန်အသင်းတော်ကို ဤသို့ပြောခဲ့သည်– ‘သေသည်တိုင်အောင်တည်ကြည်လော့။ သို့ဖြစ်လျှင် အသက်သရဖူကိုငါပေးမည်။’—⁠ဗျာ. ၂:၁၀; ၁၇:၁၄။
“သရဖူ” ဟူသောစကားကလည်း ကနဦးတံဆိပ်ခတ်ခြင်းနှင့် နောက်ဆုံးတံဆိပ်ခတ်ခြင်းစပ်ကြား အချိန်ကြာညောင်းမှုရှိမည်ကို ထပ်ဆင့်ဖော်ပြ၏။ အဘယ်ကြောင့်နည်း။ ရှေးအချိန်၌ အပြေးပြိုင်ပွဲတွင်အောင်နိုင်သူကို သရဖူပေးသည့် ထုံးစံရှိခဲ့သည်။ သူသရဖူရရန် ပြေးပွဲဝင်ရုံထက်မက လုပ်ဖို့လိုသည်။ ပြေးလမ်းဆုံးသည်အထိ ပြေးဖို့လို၏။ အလားတူပင် ဝိညာဉ်တော်ဖွားခရစ်ယာန်များသည် သူတို့၏ကနဦးတံဆိပ်ခတ်ခြင်းမှ နောက်ဆုံးတံဆိပ်ခတ်သည်အထိဖြစ်သော သူတို့၏အသက်ပြေးပွဲဆုံးသည်အထိ ပြေးနိုင်မှသာ ကောင်းကင်တွင် မသေနိုင်သောအသက်သရဖူရမည်ဖြစ်သည်။—⁠မဿဲ ၁၀:၂၂; ယာကုပ် ၁:၁၂။
ကနဦးတံဆိပ်ခတ်ခြင်းခံခဲ့ပြီးသော ဝိညာဉ်တော်ဖွားခရစ်ယာန်အကြွင်းအကျန်တို့သည် သူတို့၏နောက်ဆုံးတံဆိပ်ခတ်ခြင်းကို မည်သည့်အချိန်တွင် ရရှိကြမည်နည်း။ မြေကြီးပေါ်ရှိနေသေးသည့် ထိုသူတို့ထဲမှမည်သူမဆိုသည် ကြီးစွာသောဆင်းရဲခြင်းမတိုင်မီ “နဖူး၌” တံဆိပ်ခတ်ခြင်းခံရကြလိမ့်မည်။ ကြီးစွာသောဆင်းရဲခြင်းတည်းဟူသောလေးမျက်နှာလေ လွှတ်သောအခါ ဝိညာဉ်ရေးဣသရေလအားလုံးတို့သည် နောက်ဆုံးတံဆိပ်ခတ်ခြင်း ခံရပြီးသားဖြစ်လိမ့်မည်။ သူတို့ထဲမှ အနည်းငယ်သောသူတို့သည် အသွေးအသားဖြင့် အသက်ရှင်နေဆဲဖြစ်သော်လည်း သူတို့၏မြေကြီးအသက်တာ ကုန်ဆုံးရမည်ဖြစ်သည်။
က၀၇ ၁/၁ စာ. ၃၀-၃၁
အောင်မြင်မှု ယင်းကို သင်မည်သို့တိုင်းတာသနည်း
မှန်ကန်သောရွေးချယ်မှုက အသက်တာတစ်လျှောက် ကောင်းချီးရစေ
ဂိလဒ်ကျောင်းဆင်းများ နှလုံးထိမိစေသည့်ညွှန်ကြားချက် ရရှိကြ
‘သင်သည် အမှန်ရွှင်လန်းခြင်းကို ပြုရမည်’
စာသား စာပေ ကူးယူရာမှာ ရွေးချယ်စရာများ ကင်းမျှော်စင်—လေ့လာရန် စာစောင် ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၀၇
ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၀၇
ကင်းမျှော်စင်—လေ့လာရန် စာစောင် ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၀၇